Matayos 5: Wacdiyadii Buurta ahayd, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Ciise wuxuu isbarbar dhigayaa lix waxbaris oo hore iyo barisooyin cusub. Wuxuu soo xiganayaa waxbariddii hore lix jeer, badiyaa wuxuu ka yimid Tawreed laftiisa. Waxay muujineysaa heer cadaalad ah oo baahi badan leh.
Midka kale ha quudhsan
Waad maqasheen inay dadkii hore yiraahdeen: "Ha dilin [dil]"; laakiin ku alla kii wax dila, xukun buu heli doonaa » (V. 21). Tani waa xigasho ka timid Tawreed, oo sidoo kale soo koobeysa sharciyada madaniga ah. Dadku way maqleen markii loo akhriyey Qorniinka. Waqtigii ka horeeyey fanka daabacan, dadku badanaa waxay maqlaan qoraalka halkii ay aqrin lahaayeen.
Kumaa ku hadlay ereyga sharciga "odayga"? Waxay ahayd Ilaah qudhiisa Buur Siinay. Ciise ma soo xigto dhaqan qalloocan oo Yuhuudda ah. Wuxuu soo xigtay Tawreed. Kadibna wuxuu hor dhigayaa dalabka kadhanka ah hal adayg: "Laakiin waxaan idinku leeyahay: kan walaalkiis u xanaaqay isagaa xukumay xukunkiisa. (V. 22). Laga yaabee iyadoo loo raacayo Tawreedka, tani runti waxay ahayd ujeedada, laakiin Ciise kuma doodayo aasaaskaas. Ma uusan sheegin cidda u oggolaatay inuu wax baro. Waxa uu barayaa waa run sababta ugu fudud ee isagu waa kan odhanaya.
Waxaa naloo xukumay ciilkeena darteed. Qof doonaya inuu dilo ama doonayo qof kale inuu dhinto waa qalbigiisa gacankudhiigle, xitaa haddii uusan awoodin ama uusan dooneynin inuu falka sameeyo. Si kastaba ha noqotee, xanaaq kasta ma aha dembi. Ciise qudhiisa ayaa xanaaqay mararka qaarkood. Laakiin Ciise ayaa si cad u sheegay: qof kasta oo xanaaqsan waxaa lagu xukumi doonaa xukunka. Mabda 'waxaa lagu dhejiyay ereyo adag; waxyaabaha ka reeban ma liis gareysan. Halkaa markay marayso iyo qodobbada kale ee wacdinta, waxaynu ku aragnaa inuu ciise si cad u qeexay dalabkiisa. Kama qaadan karno bayaannada khudbadda oo waxaan u dhaqmaynaa sidii inay jirin wax ka reeban.
Ciise wuxuu raaciyay: “Laakiin ku alla kii walaalkiis ku yidhaahda, Naa waxtarla'aan baad tahay! laakiin ku alla kii dhaha: Doqon yahow, dambiilaha dabka ah waa lagu xukumay. (V. 22). Ciise kuma hadlayo kiisaska cusub ee hogaamiyaasha yahuudda halkan. Waxay u badan tahay inuu soo xigto "adeegsi la'aan" weedho ay horey u baray culimadu. Marka xigta, Ciise wuxuu yidhi ciqaabta dabeecadaha xunxun way ka sii daraysaa tii xukunka maxkamadda rayidka - waxay ugu dambayntii aadeysaa xukunkii ugu dambeeyay. Ciise qudhiisa ayaa dadka ugu yeedhay "doqonno" (Matayos 23,17, oo leh isla ereyga Giriigga). Uma adeegsan karno sharciyadan sharci ahaan sharci ahaaneed oo ay tahay in si rasmi ah loo raaco. Ujeedadu waa in wax la caddeeyo. Muhiimadu waxay tahay in aynaan quudhsan dadka kale. Mabda 'mabaadi'daani waxay dhaafaysaa ujeeddada Tawreed maxaa yeelay xaqnimada dhabta ahi waxay astaan ​​u tahay boqortooyada Ilaah.
Ciise wuxuu ku cadeeyay laba tusaale: «Sidaa darteed: Haddii hadiyaddaada allabari ay ku dul bixiso meesha oo ay maskaxdaada ku soo dhacdo in walaalkaa wax kaa haysto, hadiyaddaada ku dhaaf meesha allabariga hortiisa oo hore tag oo naftaada la heshii. walaalkaa la tag, kaalay oo allabari ubixiya Ciisena wuxuu noolaa waqti uu axdigii hore weli ansax ahaa oo dib u xaqiijinta sharciyadii axdigii hore micnaheedu maahan inay weli shaqeynayaan maanta. Masaalkiisa wuxuu muujinayaa in cilaaqaadka ka dhexeeya labada qof ay ka qiimo badan yihiin dhibbanayaasha Haddii qof wax kaa haysto (haddii loo idmaday iyo haddii kaleba) markaa qofka kale waa inuu qaadaa tallaabada ugu horreysa. Hadday iyadu sugto, ha sugin; ka qaad dadaal. Nasiib darrose, tani had iyo goor Suuragal maaha. Ciise ma siinayo sharci cusub, laakiin wuxuu sharraxayaa mabda'a ereyada cad: Ku dadaal inaad la heshiiso.
«Si dhakhso leh ula hadal qofka kaa soo horjeedda inta aad wali ku sii jirtid jidka, si uusan qofka kaa soo horjeedaa uga jawaabin xaakinka iyo garsooraha garsoorka oo adiga lagugu tuuro xabsiga. Runtii, waxaan kugu leeyahay, Halkaas ka bixi maysid ilaa aad bixiso lacagta u hadhsan ee ugu dambaysa » (Aayadaha 25aad). Mar labaad, had iyo goor suurtagal maahan in la xalliyo murannada ka baxsan maxkamadda. Waa inaanan u oggolaan in kuwa dacwoodaya annaga culays saaraan. Sidoo kale, Ciise ma saadaalinaayo in aannaan waligeen naxariis u heli doonin maxkamadda rayidka horteeda. Sidii aan sheegay, ma yeeli karno ereyada Ciise sharciyada adag. Sidoo kalena nama siiyo talo xigmad leh oo ku saabsan sida looga fogaado dambiga. Isaga ayaa uga sii muhiimsan isaga inaan nabad doonno, maxaa yeelay taasi waa dariiqa cadaaladda dhabta ah.
"Waxaad maqashay in la yidhi: Waa inaanad sinaysan" " (V. 27). Ilaah wuxuu amarkan ku bixiyey Buur Siinay. Laakiin Ciise wuxuu noo sheegayaa: "Ku alla kii naag eegaa inuu iyada damacaa durba qalbigiisuu kaga sinaystay." (V. 28). Amarka 10-aad wuxuu mamnuucay damac, laakiin amarka 7-aad ma uusan mamnuucin. Waxay ka mamnuucday "sino" - dabeecad lagu habeyn karo sharciga madaniga iyo ciqaabta. Ciise iskuma deyin inuu ku xoojiyo waxbaristiisa iyada oo loo marayo Qorniinka. Ma aha inuu sameeyo. Waa erayga nool oo wuxuu leeyahay awood ka badan tan qoran.
Waxbaristii Ciise waxay raacdaa qaab: sharciga jirku wuxuu sheegayaa wax la taaban karo, laakiin caddaaladda dhabta ahi waxay u baahan tahay wax intaa ka badan. Ciise wuxuu sameeyaa odhaahyo xad dhaaf ah si ay u gaaraan barta Markay ku saabsan tahay sinada, wuxuu dhahay: "Laakiin haddii ishaada midig ay kugu kiciso wasakh, iska tuur oo iska tuur. Waxaa kuu wanaagsan in addimahaaga mid ka mid ah uu boobo oo jidhkaaga oo dhan jahannamada lagu tuuri doono. Haddii gacantaada midig ay ku khiyaanayso inaad ku dhacdo, iska jar oo iska tuur. Waxaa kuu wanaagsan in mid ka mid ah addimadaadu ay boobaan oo aan jirkaaga oo dhan jahannamada geli doonin » (Aayadaha 29aad). Dabcan, way fiicnaan laheyd inaad lumiso qayb jirka ka mid ah nolosha weligeed ah. Laakiin tani runtii maahan beddelkeenna, maaddaama indhaha iyo gacmaha aysan nagu hoggaamin karin dembi; haddii aan ka saarno waxaan gelin lahaa dambi kale. Dembigu wuxuu ka yimaadaa qalbiga. Waxaan ubaahan nahay isbadal ku dhaca qalbiyadeena. Ciise wuxuu ku nuuxnuuxsaday in fikirkayagu u baahan yahay in la daaweeyo. Tallaabooyin aad u culus ayaa loo baahan yahay si looga tirtiro dembiga.
Waxaa kale oo la yidhi: Ku alla kii naagtiisa furaa waa inuu siiyaa warqad furitaan ah " (V. 31). Tani waxay tixraacaysaa marinka ku jira Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 24,1-4, kaasoo aqbalaya warqaddii furiinka inay tahay caado hore u dejisay reer binu Israa'iil. Sharcigan uma uusan ogolaan naag haweeney ah inay guursato ninkeeda koowaad, laakiin marka laga reebo xaaladan dhifka ah, ma jirin wax xayiraad ah. Sharciga Muuse wuxuu oggolyahay furitaan, laakiin Ciise ma uusan oggolaan.
Laakiin waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii naagtiisa ku fura wax aan sino ahayn mooyee, wuxuu ka dhigayaa inay sinaysato, oo ku alla kii guursadaa nin la furay wuxuu sinaystaa » (V. 32). Tani waa bayaan adag - waa adag tahay in la fahmo waana adag tahay in la dhaqan galiyo. Aynu nidhaahno nin xun ayaa xaaskiisa kaxaynaya sabab la'aan. Markaas iyadu si otomaatig ah ayey u tahay dambiile? Oo ma dambi bay u tahay nin kale inuu guursado dhibbane furiinka?
Waxaan khaldami karnaa haddii aan u fasirayno bayaankii Ciise qaanuun sharci ah oo aan la bedeli karin. Sababta oo ah Bawlos waxaa Ruuxu u muujiyey inay jirto sharci kale oo ka baxsan furitaanka (1 Korintos 7,15). In kasta oo kani yahay daraasad ku saabsan Wacyigelinta Buurta, waa inaan maanka ku haynaa in Matayos 5 uusan ka hadlin ereyga ugu dambeeya ee furriinka. Waxa aan halkaan ku aragno waa qeyb ka mid ah sawirka guud.
Bayaanka Ciise ee halkan waa bayaan naxdin leh oo raba inuu wax cad caddeeyo - kiiskan macnaheedu wuxuu yahay in furiinku had iyo jeer la xidhiidho dembiga. Ilaah wuxuu rabay guur cimri dheer oo guurka ah waana inaan ku dadaalnaa inaanu ku sii wadno sidii uu ugu talogalay. Ciise iskuday isku dayi maayo inuu ka doodo halkan waxa ku saabsan waxa la yeelayo haddii aan waxyaabuhu u socon sidii loogu talagalay.
"Waad maqasheen inay dadkii hore yiraahdeen:" Waa inaadan dhaar been ah dhaarin, oo waa inaad Rabbiga ugu dhaartaa "" (V. 33). Mabaadiidaani waxaa lagu bartaa kutubta Axdiga Hore (4-aad Mo 30,3; 5th Mo 23,22). Laakiin wixii Tawreed si cad u oggol yahay, Ciise maysan samayn: «Laakiin waxaan idinku leeyahay, Ha dhaaraninaba jannada, jannada, waayo, waa carshigii Ilaah; weli dhulka la dhig, waayo, waa meeshuu cagihiisa cagihiisa dhigo; weli wuxuu ku dhow yahay Yeruusaalem, waayo, waa magaalada magaalada boqorka weyn » (Aayadaha 34aad). Sida muuqata, hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu waxay u oggolaadeen inay ku dhaartaan iyagoo ku tiirsan waxyaalahan, laga yaabee inay ka fogaadaan ku dhawaaqidda magaca quduuska ah ee Ilaah.
Madaxaagana ha ku dhaaran. sababta oo ah kama dhigi kartid hal timo cad ama madow. Laakiin hadalkaagu waa: haa, haa; maya Maxay ku saabsan tahay shar (Aayadaha 36aad).
Mabda 'waa mid fudud: daacadnimo - si la yaab leh ayaa loo cadeeyay. Waxa ka reeban waa la oggol yahay. Ciise laftiisu si fudud ayuu uga gudbay haa ama maya. Wuxuu had iyo jeer dhahaa Aamiin, aamiin. Wuxuu yidhi samooyinka iyo dhulku way idlaan doonaan, laakiin ereyadiisuna ma oggola. Wuxuu u yeedhay Eebbe inuu ka marag furo inuu run sheegayo. Sidoo kale, Bawlos wuxuu adeegsaday waraaqo cayiman oo waraaqdiisa ah halkii uu si fudud u oran lahaa haa (Rooma 1,9: 2; 1,23 Korintos).
Markaa waxaan mar labaad u aragnaa inaanaan ahayn inaanu tixgelinno odhaahyada mucjisada ah ee Buurta sida inay yihiin Mamnuucyo ay tahay in si rasmi ah loo raaco. Kaliya waa inaan daacad ahaano, laakiin xaaladaha qaarkood waxaan si gaar ah u xaqiijin karnaa run ahaantii waxa aan dhahayno.
Maxakamadda, si aan u isticmaalno tusaale casri ah, waxaa naloo ogolyahay inaan "dhaarno" inaan runta sheegno oo markaa aan ugu yeeri karno caawimaad Ilaahay. Waa wax yar in la yiraahdo "dhaarid" waa mid la aqbali karo, laakiin "dhaar" ma ahan. Maxkmadda dhexdeeda ereyadan waa isku mid - oo labaduba waa wax ka badan haa.
Ciise mar kale ayuu ka soo xiganayaa Tawreed: "Waad maqasheen in la yidhi:" Il il, il ilig " (V. 38). Waxaa mararka qaar la sheegaa in tani ay ahayd heerka ugu sarreeya ee aargudashada Axdigii Hore. Xaqiiqdii, waxay ahayd ugu badnaan, laakiin mararka qaarkood waxay ahayd ugu yar (3 Mo 24,19-20; 5 Mo 19,21).
Si kastaba ha noqotee, Ciise wuxuu reebay wixii Tawreedka dalbado: "Laakiin waxaan idinku leeyahay waa inaadan iska caabin xumaanta" (V. 39a). Laakiin Ciise qudhiisa wuu ka soo horjeeday dadka xun. Wuxuu ka eryay kuwa wax beddela macbudka. Rasuulladu waxay iska caabiyeen macallimiinta beenta ah. Bawlos wuu is difaacay isagoo sheeganaya xuquuqdiisa muwaadin Roomaanimo markii askartu waajib ku ahayd inay isaga diidaan. Hadalka Ciise mar kale waa la buunbuuniyey. Waxaa loo oggol yahay inuu ka difaaco dadka xun. Ciise wuxuu noo oggol yahay inaan tallaabo ka qaadno dadka xun, tusaale ahaan, inaan booliska u soo sheegno dembiga.
Bayaanka soo socda ee Ciise waa in loo arkaa inay buunbuunin tahay. Taas micnaheedu ma aha inaan u eryi karno inay yihiin wax aan faa'iido lahayn. Waxay dhammaantood ku saabsan tahay fahamka mabda'a; waa inaan u ogolaano iyaga inay ka hortagaan dhaqankeena anagoo sameyn laheyn qaanuun cusub oo qaanuun ah sharciyadaan maxaa yeelay waxaa loo maleynayaa in waxyaabaha ka reeban aan waligood la ogolaan.
Haddii uu qof ku garaaco dhabankaaga midig, kan kale u gudbi sidoo kale » (V. 39b). Duruufaha qaarkood, waxa ugu fiican waa inaad iska tagto, sidii Peter oo kale (Falimaha Rasuullada 12,9). Sidoo kale khalad ma aha inaad naftaada difaacdo hadal ahaan sida Paul (Falimaha Rasuullada 23,3). Ciise wuxuu ina baray mabda 'mana ahan sharci in si adag loo raaco.
"Haddii qof doonayo inuu xaq kuu lahaado oo uu dharkaaga qaato, dharkaaga xitaa ka tag. Haddii qof ku qasbo inaad mayl raacdo, laba la soco. Sii kuwa ku weydiiya hana ka leexan kuwa doonaya inay wax kaa amaahdaan. (Aayadaha 40aad). Haddii dadku kugu dacweeyaan 10.000 oo faran, uma baahnid inaad siiso 20.000 oo faran. Haddii qof xado gaarigaaga, maahan inaad dhiibtid gaarigaaga. Haddii qof sakhraansan uu ku weydiiyo CHF 10, uma baahnid inaad isaga siiso wax. Hadalada la buunbuuniyey ee Ciise maahan xaqiiqada ah inaan u ogolaano dadka kale inay ka faa'ideystaan ​​kharashkeena, mana ahan inaan ku abaalmarinno taas. Saas ma aha, ujeedadu waa inaanan aargoosan. Ka taxaddar inaad nabad samaysatid; Ha isku deyin inaad waxyeello u geysato kuwa kale.
"Waxaad maqashay in la yidhi:" Waa inaad deriskaaga jeclaataa "oo cadowgaaga necbahay" (V. 43). Tawreedku wuxuu faray jacayl waxayna Israel amar ku siisay inay laayaan reer Kancaan oo dhan oo ay ciqaabto kuwa xumaan fala oo dhan. Laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin silciya, (V. 44). Ciise wuxuu ina baray qaab kale, hab aan ka dhicin adduunka. Sabab? Muxuu yahay tusaalaha dhammaan cadaaladan adag?
«Si aad u tihiin wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira» (V. 45a). Waxaa naloo sheegay inaynu noqonno sida isaga oo kale oo isagu aad buu u jeclaa cadaawayaashiisa si uu u diro wiilkiisa si uu ugu dhinto iyaga. Uma oggolaan karno carruurteenna inay u dhintaan cadaawayaasheenna, laakiin waa inaan jeclaanaa oo u barinaa iyaga inay barakeeyaan. Ma sii wadi karno dabaqyada uu Ciise u dhigay hage. Laakiin khaladaadkeena soo noqnoqonaya waa inaysan naga hor joogsan isku dayga.
Ciise wuxuu ina xusuusinayaa in Ilaah “u oggolaanayo qorraxda inay u soo fuurto xumaanta iyo wanaagga, roobna u xajiyo kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn” (V. 45b). Isagu wuu u roon yahay qof walba.
«Sababtoo ah hadaad jeceshahay kuwa ku jecel, abaalkee ayaad helaysaa? Cashuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? Oo haddii aad walaalihiin uun saaxiib la tahay, maxaad gaar u tahay? Dadka aan Yuhuudda ahayn miyaanay sidaas oo kale samayn? (Aayadaha 46aad). Waxaa naloogu yeeray inaan sameyno wax ka badan sidii caadiga ahayd, in ka badan dadka aan is-beddelin. Kartida aan u leenahay inaan kaamil ahaana kama beddeleyno wicitaankeenna aan ku dadaalno horumar.
Jacaylka aan u qabno dadka kale waa inuu ahaadaa mid dhammeystiran, oo loo wada gaarsiiyo dadka oo dhan, waa taas waxa Ciise ugu talagay markii uu yiri: "Markaa inaad u fiicnaatid sida Aabbihiinna jannada ku yahay uu kaamil yahay." (V. 48).
Matthew 5: Mawduuca On Mount (Qaybta 2aad)